Madaxweynaha oo ka tacsideeyey geeridii Danjirihii Somalia uga wakiilka ahaa dalka Masar – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha oo ka tacsideeyey geeridii Danjirihii Somalia uga wakiilka ahaa dalka Masar
MAREEG 22 November 2015
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tacsi diray shacabka ,qoyska iyo eheladii uu ka geeriyooday Marxuum Cabdullaahi Xasan Maxamuud oo ahaa Danjirihii Soomaaliya u fadhiyey dalka Masar.
“Innaa Lillaahi waa Innaa Ileyhi Raajicuun. Ilaahay ha u naxariisto marxuumka. Waxaa uu ka mid ahaa tiirarkii aasaaska u ahaa diblomaasiyadda Soomaaliya. Waxaa khibraddiisa u dheereyd dadaal gaar ah oo u ugu adeegayey Qaranka muddadii burburka aan ku jirney”.
Madaxweynaha waxa uu marxuumka Ilaahay uga baryey inuu naxariistii jannadii fardowsa ka waraabiyo, qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyoodayna uu samir iyo iimaan ka siiyo.
Marxuum Cabdullaahi Xasan Maxamuud ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Qaahira, waxaana uu muddo dheer ka mid ahaa diblomaasiyiinta udub dhexaadka u ahaa xiriirka Soomaaliya iyo waddamada Carabta.
Dhinaca kale, Allaha U Naxariistee Ambassador Abdullahi Hassan Mohamoud waxa uu ahaa Wakiilka Joogtadda ee Somalia ee Ururka Jaamacadda Carabta.
Allaha U Naxariistee, Danjiruhu waxa uu xilkaasi hayey tan iyo burburkii Dowladdii Kacaanka ee sannadkii 1991-kii, wuxuuna ahaa Diplomaasi Waddani oo kaalin fiican ka soo qaatay xoojinta Xiriirka Diplomaasiyadeed ee Somalia iyo dalalka Carabta.
Taariikh-nololeedka Marxuum Danjire Abdillahi Hassan Mohamoud